ကျွန်တော်တို့ကိုစာရင်းဖွင့်လှစ်ပါစို့5အီတလီမှာအများဆုံးသာယာလှပရထားခရီးအတူ – Levanto မှ La Spezia သို့ – Cinque Terre
အီတလီနိုင်ငံရဲ့အံ့သြဖွယ်ကမ်းရိုးတန်းကိုလိုက်နာကြောင်းမီးရထားလမ်းကြောင်းများကိုအများဆုံးပျော်စရာအကြားရှိပါတယ်. အဆိုပါ Cinque Terre ရထားလမ်း အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ဒေသ၏အီတလီရီဗီရာကျေးရွာငါးရွာတွင်အမှုဆောင်သည်. မြင်ကွင်းကျယ်ပြတင်းပေါက်များနောက်ကွယ်မှအနားယူပြီးလှပသောတောင်များကိုစုပ်ယူပါ, အဆိုပါစိမ်းပင်လယ်, bucolic စပျစ်ဥယျာဉ်, နှင့်သံလွင်အာရှရပင်. အကျဉ်းပေမယ့်အဆင်းလှပါလမ်းခရီးဘို့ Levanto နှင့် La Spezia အကြားရထားကိုယူ. သင်သည်သင်၏ရောက်ရှိပါပြီပြီးတာနဲ့ ခရီးလမ်းဆုံး, သငျသညျထို့နောက်သုံးဖြုန်းနိုင် တစ်ရက်တောင်တက် အံ့ဖှယျရွာ.
Cinque Terre Italy မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု (@cinqueterre_love)
Naples မှ Sorrento သို့ခရီးသွားပြီး Herculaneum နှင့် Pompeii ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာများကိုဖြတ်သန်းပါ. ဤအလွန့်အလွန်ခရီးသည်မြင်ကွင်းများကိုပေးသည် တောင်ပေါ်က Vesuvius နှင့်လမ်းတစ်လျှောက် Naples ပင်လယ်အော်. ဤ ရထားစီးနင်း သေချာတာတစ်ခုပါပဲ အီတလီမှာအများဆုံးသာယာလှပရထားခရီး.
အီးမှမျှဝေတစ် ဦး က post ကို. Emancipato ဓါတ်ပုံ© (@ edoardo.emancipato)
မီလန် Bolzano သို့ငါတို့အတွက်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှု5အီတလီမှာသာယာလှပရထားခရီး
မီလန်ထံမှ Bolzano တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရထားစီးတွေ့ကြုံခံစား. အီတလီအဲလ်ပ်တောင်တန်းကိုတက်စေသောအနီရောင်များနှင့်သိသိသာသာရော့ခ်တောင်ပေါ်ကမ္ဘာ၏ဖက်ရှင်မြို့တော်ကနေသင်တို့ကိုယူပြီး. အီတလီနိုင်ငံရဲ့ဟောင်းများကိုမြို့များကိုကြည့်ပါ, ခမ်းနားကျေးလက်နှင့်ဥရောပထဲမှာအလှဆုံးနှင့်ဓါတ်ပုံတောင်များ. Bolzano ဝင်ရောက်အီတလီနိုင်ငံထွက်ခွာခြင်းနှင့်တူ၏ ဂျာမဏီဝင်ရောက်, က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်ဒီသေးငယ်တဲ့မြို့အဆင်းကိုဂျာမန်ဖြစ်ပါသည် သြစတြီးယား ပထမကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီ. ဤသည်သာယာလှပ ရထားခရီး မှော်ဖြစ်ပါသည်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-most-scenic-train-journeys-in-italy-save-a-train-blog%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#ရထားခရီးစဉ် #ဇါတ်စင်နှင့်ဆိုင်သော #ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း longtrainjourneys ရထားခရီးသွား views